ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: လက်ပံတောင်းတောင် သပိတ်စခန်းတွေ အကြမ်းဖက် ဖြိုခွဲခံခဲ့ရတဲ့ ၅ လပြည့် အထိမ်းအမှတ် ရန်ကုန်မြို့မှာ ဆန္ဒပြ (ရုပ်သံ)
လက်ပံတောင်းတောင် သပိတ်စခန်းတွေ အကြမ်းဖက် ဖြိုခွဲခံခဲ့ရတဲ့ ၅ လပြည့် အထိမ်းအမှတ် ရန်ကုန်မြို့မှာ ဆန္ဒပြ (ရုပ်သံ)
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 11:15 AM
လက်ပံတောင်း တောင် အစီရင်ခံစာမှာ ...............
ဒေါ်စုအနေနဲ. အမှန်တ၇ား ကို မျက်ကွယ်ပြု ပြီး သမိုင်းမှာ
အမည်းစက် ကြီး ထင်စေမယ်. (၂)ချက်တွေ.ရပါတယ် ။
(၁) သံဃာတော် တွေ မီးရှို.ခံရ တာကိုမျက်ကွယ်ပြုတာ .... (ဗုဒ္ဒ ဘာသာဝင်တိုင်းလက်မခံတဲ. ကိစ္စ)
(၂) တိုင်းပြည်နဲ.ပြည်သူတွေ အကျိုး မများလှဘဲ စစ်တပ် အကြီးအကဲ များရဲ.
ကမ္ဘာသိ ခေါင်းဆောင် တယောက်
က ဒေသခံ ပြည်သူ တွေကို စတေးပြီး စစ်တပ်ကို
ချင်းကပ် လိုက်တာ .........
ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် အပြောနဲ့ အလုပ်ညီကြပါ
ကံ ကံ၏ အကျိုးကိုယုံပါ